Photo sawrirrada Software Review - Best Digital sawrirrada Barnaamijka
> Resource > Talooyin > Digital Scrapbooking Software Review
Scrapbooking dhaqanka waa, cabbudhinayo oo wakhti dheer qaata foomka tahay mid qaali ah. Kala duwan ka scrapbooking dhaqanka, scrapbooking digital badbaadin aad waqti iyo lacag, iyo awood u diray in nafo la xusuus badan oo ku daqiiqo. Iyadoo software scrapbooking digital , waxaad samayn kartaa wax sawiro ama images in scrapbooking digital. Iyadoo tallaabo hagitaan talaabo talaabo, waxaad si fudud oo dhaqso u beddesho kartaa sawirro aad u qaali galay xusuus qaali ah. Ilaa iyo inta aan ka walaacsanahay, ugu fiican software scrapbooking digital ku jira waa in hoos ku muuqaalada:
Dad badan marto iyo Layouts
Interface sawir dareen leh soo degida
Tafatirka awood sawir Xoog
Easy in ay la wadaagaan
Halkan waxa ku jira software scrapbooking ugu sareeya loo qiimeeyo ee digital doorashooyin our, iyada oo la raacayo shuruudaha software scrapbooking digital kor ku xusan.
Picasa waa mid ka mid software olaga iyo functional maamulka sawir xor ah oo tafatir oo kuu ogolaanaya in aad collage ka marto sameeyo. Wixii xirfadlayaasha, waxaad filan waxaa laga yaabaa in urur fiican iyo awoodaha baadi natiijooyinka Google raadinta. Si kastaba ha ahaatee, Picasa weli doorasho wanaagsan bilowga ah iyo wax toogan jiray digital caadi ah oo doonaya in ay si fudud u helo sawirrada ah oo dhan, wax saxno hir galay albums, ka dhigi collages sawir qurux badan, oo la wadaagto saaxiibadaa iyo qoyskaaga.
Ma hawlaha aasaasiga ah ee lacag la'aanta ah
Waxay bixiyaan si fiican u qaadidda red-indhaha, la rajeenayo in deg deg iyo saamaynta, iyo fursadaha qaybsiga online badan collage kale sawir & software.
Muuji sawiro aad sida a movie slide show, collage ama screensaver caadadii.
Habboon ee loogu talagalay caadi ah oo aan techies digital sawir.
Ma aha arrimo badan oo sawir collage marka la barbar dhigo Photo Collage Studio.
Ma samayn karaan buug sawir, kaarka salaan iyo jadwalka.
Ku xidhan nidaamka gal ku salaysan ee urur.
Muuqaalada urur iyo baadi Limited.
Free GIMP software bixisaa adayga ka badan.
Barnaamijka Khalkhalgelinta Free Image - GIMP
GIMP, aka, GNU Barnaamijka Khalkhalgelinta Image si weyn loo qaybiyey oo caadi ah sida retouching sawir, halabuurka image & qoraalka loo isticmaalo.
Barnaamijkan waxa multi-functional. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijka fudud rinjiga, barnaamij retouching sawir xirfadle, nidaam processing Dufcaddii online, renderer ah image-soo-saarka tiro, an image qaab Converter, iwm
Sidoo kale, GIMP abuuri karaan scrapbooking digital lacag la'aan ah. Weey wanaagsan tahay, huh? Dhab ahaantii, waa GIMP freeware ah digital scrapbooking in loo tixgeliyaa sida awood badan sida Adobe Photoshop. Waxaad tegi kartaa www.gimp.org muddo ka soo jeeda free digital scrapbooking, Casharrada oo lacag la'aan ah, burush lacag la'aan ah iyo wixii la mid ah.
Advanced sawrirrada Software - Photoshop Qaybaha
Adobe Photoshop Qaybaha waa nooca fudud oo sahlan ee Adobe Photoshop. Tani software scrapbooking digital isku awood iyo xog si aad u abuuri karaan scrapbooking digital aad sawiro digital. Samee sawiro aad eegto heerka ugu fiican ee wax kasta oo aad waayo-aragnimo tafatirka --a design cusub saaxiibtinimo iyo tallaabo-tallaabo sixiddiisa caawimaad gargaar ka heli aad bilowday. Si fudud u qabtaan heer sare-badan oo laga sii wanaajiyo iyo retouching in awoodda halabuurka la yaab leh, qalab image-xulashada fudud mahad. Oo waxay had iyo jeer ka helo oo dhan aad sawiro digital u arkaan fudayd.
Professional, Xoog weli fududahay in la isticmaalo
Search sawir Quick
Saamaynta filter la yaabka leh
Si fudud wadaagaan internetka
No arrimo scrapbooking digital
Qalooca waxbarashada yaacday
Ma fududaan doonto laga bilaabo scrapbookers
Gebogebadii, haddii aad tahay xirfadle ama semi-xirfadeed, ama aqoon u leh Adobe Photoshop CS, Adobe Photoshop Qaybaha gabi ahaanba waa software scrapbooking digital ugu fiican . Xitaa in aad abuuri karaan scrapbooking digital casri ah iyo xarrago ka xoq, oo aan la isticmaalin wax template scrapbooking digital hor-dhigay ama farjiyadooda, scrapbooking digital.
2015 Maalinta Gift Guide Hooyada